မြန်မာနိုင်ငံရေးအပေါ် မနာလိုစိတ်များနေတဲ့ ထိုင်းအစိုးရလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာနိုင်ငံရေးအပေါ် မနာလိုစိတ်များနေတဲ့ ထိုင်းအစိုးရလား
မြန်မာနိုင်ငံရေးအပေါ် မနာလိုစိတ်များနေတဲ့ ထိုင်းအစိုးရလား
Posted by phone_kyaw on May 9, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
ဗိုလ်နုတ်ခမ်းမွေးက မြင်းဆေးထုတ်တယ်၊ သေချာတယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာလဲ သက်သေအထောက်အထား။ ဘယ်မှာလဲ ဖမ်းဆီးရမှု့ မှတ်တမ်း။ ဘယ်မှာလဲ သက်သေ။ ဒါတွေကို တစ်ခုမှ မီဒီယာ သိအောင် ကာယကံရှင်သိအောင်မထုတ်ပြပဲ မြန်မာအစိုးရဆီကနေ တောင်းယူတာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးတာအပြင်၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံညီညွတ်ရေးလမ်းစကို ဖြိုခွဲသလိုပဲ။
တကယ်လို့ ထိပါးလာရင် ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကရင်နယ်ထဲမှာ အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ တွေကို နဲနဲလောက်ပညာပေးလိုက်ရင် ထိုင်းတွေလေသံပြောင်းလာလိမ့်မယ်။ ကဲ…ဒီတော့ ဗိုလ်မှုရှေးနဲ့ ဗိုလ်စန်းအောင်တို့ ရေ…..ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ သိမယ်ထင်တယ်။
ကျုပ်လဲ အဲဒီလိုပဲ ထင်တယ်။ အဲဒီ လောက်အထောက်အထား ခိုင်လုံနေရင် အဲဒီအချိန်ထဲက ဘာလို့ဆုကြေးထုတ်ပြီး မကြေညာလဲ။ ဒီရင်လပ် ကတော့ ဦးအောင်ဇေယရဲ့ ဟိုဟာနဲ့ တွေ့ချင်နေပြီထင်တယ်။ ဝါးရင်းတုတ်…. ပြောတာပါ။
ထိုင်းတွေက မြန်မာတွေဆိုရင် မနာလိုတာမဟုတ်ဘူးဗျ …. မုန်းကိုမုန်းတာ … ဒါက သမိုင်းချီပြီးတော့ကို မုန်းတာ … ကျုပ်တို့ ထားဝယ်ကလူတွေ တဖက်ကမ်းမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရင် … သေရင်သေ .. မသေရင် ရူးအောင် ကို လုပ်ပစ်တာ … ခိုင်းတာများ ပိုးစိုးပက်စက်ကို ခိုင်းပစ်တာ …
ထိုင်းကောင်တွေလဲ ဖာချ၊ဆေးချတာများပြီး သွေးလေဖောက်ပြန်နေကြတယ်ထင်တာပဲ
အဓိကက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မနာလိုတာနေမှာပါ
မူးယစ်ထုတ်တယ်ထားဦး..အရင်..က ဖီးလ်တက်လို့ ငြိမ်ခံနေပြီး အခုမှ မရှူရတဲ့ဘိန်း ဗွက်နဲ့ပက်ချင်နေတာပါ
ကျုပ် သည်တခေါက် ရန်ကုန်ပြန်တော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ
ဂျပန် ကို ယပက်လက်တွေ အလည်ခေါ်တဲ့ ယပက်လက် လူမျိုး စကားပြန် တယောက်နဲ့ ခင်ခဲ့တယ်…
မော်ဒန် ထိုင်း လည်း ဖြစ် ကျနော်တို့ ကြားက ကွန်ဗာဇေးရှင်းကလည်း ဂျာပန်လို ပြောဆိုတော့
ပြသနာ မရှိခဲ့ပါဘူး ..ဘေးက ဂျပန်လူမျိုး မိတ်ဆွေသစ်ရှိတာကြောင့်လည်း ပါမှာပေါ့…
သူလည်း တိုးဂိုက် ..ကိုယ်လည်း မာကတ္တာ ..စကားပြောတော့ မဖောင်းကြဘူးပေါ့ဗျာ …
အဲ့ ..တခုလေးပဲ …
ကိုဖုန်းကျော်တို့ သဂျီးတို့ ပြောဖူးတာလေး …
မြန်မာ ကို ကျွတ်တယ် ဆိုတာ …အဲ့ဒါတော့အမှန်…
သဂျီးပြောဖူးတဲ့ ..ကံမကောင်းလို့ မွဲနေတဲ့ အစ်ကိုကြီးတယောက်လို ဆိုလား ..အဲ့.. အဲ့သည့်
သူတို့ မြန်မာကို စစ်၂ခါရှုံးဖူးကြောင်း ဂျပန်ရှေ့မှာ ရဲရဲကို ပြောပြသွားတယ်ဗျ…
အံ့သြစရာကောင်းတာ..ခုနှစ်နဲ့တကွ ..ရှုံးလို့ သြဇာ ခံ ဖြစ်နေတဲ့ ကာလ နှစ်အပိုင်းအခြားကို
အတိအကျ ပြောသွားတာဗျ ….
သမိုင်းပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ ဂျပန်မှာ တိုးဂိုက်လုပ်စားသူ တယောက်အနေနဲ့ သည်လောက်ကြီး
ဒီတေးလ် သိမနေသင့်ဘူးထင်တာပဲ …
သမိုင်းလေ့လာသူမဟုတ်တဲ့ သာမန် ပြည်သူတောင် သမိုင်းထဲက အဆိုပါ ကိစ္စရပ်တွေကို အသေးစိတ် မှတ်သား
ထားတယ် ဆိုတာလေး သွားတွေ့ရရဲ့ ..(မှတ်ထားတာ အမှန်လား အမှားလား မငြင်းဘူးနော..)
ပြုသူ အသစ် ဖြစ်သူအဟောင်း စကားပုံပဲ ပြောင်းပြန်လှန်ရတော့မလားပဲဗျာ….။
အဲ့လိုနဲ့ စကား တနေရာမှာ ကျုပ်တို့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးအကြောင်း ရောက်လာပါရော..
ငတိက သူ ရန်ကုန်ရောက်ဖူး ကြောင်း ရွှေတိဂုံဖူးဖူး ကြောင်း ပြောရင်းနဲ့
အထက်က စစ်ရှုံးတဲ့ ကိစ္စ ပြန်နွယ်ပြီး အဆိုပါ ဘုရားက ရွှေတွေက သူတို့ စစ်ရှုံးတုန်းက
ယူသွားတာ လို့ ဘလိုင်းကြီး လာစွပ်စွဲလေရောဗျာ …
ကျုပ်လည်း ခင်ဗျားက လိုက်ကြည့်ထားလို့လား လို့ ဘုတော တောလိုက်တယ်..
မှန်တာပြောရင် မငြင်းချင် အမုန်းမပွားချင်လို့ ဟာသ လုပ်ပစ်ရင်း စကားဝိုင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာပါ..
လှေယာဉ်မယ်လေးဆီက ကော့ညက်လေး စုပ်ရင်း စကားဖြတ်လိုက်ပါတယ်…
(သမိုင်း လိုက်စားသူတွေ ငြင်းချင် ငြင်းကြပါ )
နောက်ပိုင်းတော့ တခြား အရာတွေ ပြောရင်း ကျနော်တို့ ၃ယောက် ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်..
ဘယ်သူ့ တိုင်းပြည်က ဘယ်သူ့တိုင်းပြည်ကို စစ်နိုင် စစ်ရှုံးခဲ့သလဲ မပြောတော့ဘဲ…
သူ့ဘာသာ ကိုယ့်ဘာသာ နဲ့ အပြန်အလှန် နာမည်စာလုံးလေးတွေရေးပြီး visiting card
တွေလဲခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာ…. နားမလည်ပေမယ့် ကြည်နူးခဲ့ရပါတယ်…
(ထိုင်း အသံထွက်မှာ Za မရှိဘဲ Sa သာရှိလို့ ကျနော့်နာမည် ကို Serni လို့ ပေါင်းခဲ့ကြောင်းလေး လက်တို့ပါရဲ့)
မနက်ဖြန် DKBA သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲရှိတယ် ပြောတယ်..
တဒင်းထူး ဘာရုတ်ဖို့လဲ အရက်နဲ့မြည်းမလို့လား ??
သူလဲ ယပက်လက်(မန်း) ဂေဇက် ဖတ်လို့နေမှာပေါ့ … နောက်တာ … :grin:
လောလောဆယ်ကတော့.. မြန်မာ ၄သန်းလောက်.. အလုပ်အကိုင်ပေး..ထမင်းတင်ကျွေးထားတဲ့.. ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..
သူတို့တွေဟာ.. ကမ္ဘာမှာစစ်တပ်အာဏာအသိမ်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်.. သမိုင်းမှတ်တိုင်ထူထားတဲ့.. ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်..
.. မြန်မာ ၄သန်းလောက်ကို.. ကယ်တင်အလုပ်ပေးထားတာမမေ့ဖို့နဲ့…
မြန်မာရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုဘဲပြောမလား၊ တိုးတက်မှုဘဲပြောမလား၊ အနေအထားကိုကြည့်ရင် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူတွေ အရင်ကစကားတန်ဆာအဖြစ်ရှိခဲ့ရာကနေ၊ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပြီလို့ဆိုရပါမယ်။ ပထမဆုံးကမီဒီယာမဏ္ဍိုင်ရဲ့ အချုတ်အနှောင်လျော့နည်းလာမှုက နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒကို ကမ္ဘာကမြန်မာကို ရှင်ရိုသေဖြစ်အောင် အမြင်ပြောင်းလာစေတဲ့ တွန်းအားကြီးတခုဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာပါတယ်။ မသိမသာဘ၀ကနေ၊ သိသိသာသာကြီးဖြစ်လာနေပါပြီ။ အခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ ရှင်ရိုသေလူရိုသေ အဆင့်ကို ရေရှည်ထိမ်းသိမ်းနိုင်ဘို့က အခရာကျပြီးခက်ခဲနက်နဲတဲ့အပိုင်းဖြစ်လာပါတယ်။ ပြည်ပနဲ့သာမက ပြည်တွင်းမှာလည်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အစိုးရတွင်းအားပြိုင်မှု၊ အစိုးရကိုယ်တိုင်က လူထုအပေါ်ရပ်တည်ချက်အခြေခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်နေရမှုနဲ့ ဆန်းကျင်ဖက်ရှိဆဲ အတိုက်အခံပါတီနဲ့အင်အားစုရဲ့သွေးတိုးစမ်းမှုတွေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့လူထုက တပြိုင်တည်း ခံစားနေကြရချိန်ပါ။
ကလေးဆန်တဲ့၊ ခေတ်နောက်ကျတဲ့၊ အဖြေမထွက်နိုင်တဲ့ မျက်စေ့စုံမှိတ်အော်နေကြရမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အနောက်နိုင်ငံများက speechless ဖြစ်နေပြီး၊ အာဆီယံနဲ့အခြားအိမ်းနီးချင်းများက မနာလိုဖြစ်နေကြချိန် လို့ကင်ပွန်းတပ်ရမဲ့ကာလကြီးပါ။ တနည်းပြောရရင် အတိမ်းအစောင်းခံလို့မရတဲ့ critical era ထဲရောက်နေကြောင်းပါ။
သူကြီးပြောသလို မြန်မာလေးသန်းလောက်ကိုတင်ကျွေးထားလို့ ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းမကောင်းတော့
မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံရှိလို့ နိုင်ငံခြားအလည်သွားရင်တောင် ယိုးဒယားကိုမသွားဘူး… သူတို့ရဲ့
မြန်မာမုန်းတီးရေးဝါဒကို မကြိုက်လို့။ သမိုင်းခောတ်ကကိစ္စတွေကို ချေးခြောက်ရေနူးနေမယ်ဆိုရင်
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကင်းကင်းနေလေ။ အဲလိုလည်းမကင်းနိုင်ဘဲနဲ့ စီးပွားရေးဈေးကွက်ကျတော့လာရှာပြီး သမိုင်း
ကြောင်းပဲပြန်လှန်နေတာတော့ နိုင်ငံကြီးသားလုံးဝမပီသပါဘူး .. ဒါကြောင့် ယိုးဒယားဆို
ကဘုန်းကျော်ရေးလို့ ဖတ်ရတဲ့ ပို့စ်ထဲ .. ဒီပို့စ်တစ်ခုပဲ.. အနှောက်သွားလွတ်လွတ်နဲ့ ရေးထားသလို ခံစားမိတဲ့အပြင် ၊ အမြင်ချင်းထပ်တူကျတဲ့ … ပို့စ်ပါပဲ .. ။ ဗိုက်ကလေးပြောသလိုပဲ .. ပြောလိုက်ချင်ပေမယ့် …. ရေးမထွက်လို့ … အပေါင်းပဲ ပေးခဲ့ပါတယ် … ။
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးကလည်း … ပြည်တွင်းမီဒီယာ သတင်းထောက်များကို … အင်ဗိုက်လုပ်ပြီး မြ၀တီမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေပါတယ် .. မကြာမီ အဖြူအမည်း သဲကွဲထင်ရှားလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. ။ မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ကလည်း …. တခြားဖွဲ့ကလူဖြစ်သည့်တိုင်အောင်… မြန်မာနိုင်ငံသားချင်း ကာကွယ်မှုတော့ ပေးသင့်တယ် ။
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာ့ဆရာဂျီးများအတွက်သာ
ပြေားဘီ ကိန်ကိန် ကိန်ကိန်
ဒီကိစ္စမှာတော့ ကိုစန်းအေးင်တို့ ဖက်ကနေ ကျနော်ရင်နာသဗျာ။